Hery - Tsiky dia ampy | Serasera.org
2015-05-06 @ 22:23 in Serasera.org
Teo am-panatsarana ny takelaka ohabolana (ohabolana.org) aho no sahirana kely satria betsaka ny ohabolana mitovy sy miverimberina nefa ny mpitsidika dia mampiditra ohabolana ihany. Tenenina izy ireo hoe tadiavo aloha, saingy raha diso fanoratra ilay ohabolana teo aloha dia mazava ho azy tsy hitany. Ny rindran-kajy natao koa dia mijery fotsiny raha misy ohabolana tena mitovy izay vao milaza. Fa raha vao samihafa kely fotsiny dia ampidiriny ihany.
Koa amin'izao aho izany dia mandinika hoe inona no fomba mety kokoa mba hampihena ny ohabolana mitovy tafiditra... ankoatra ny fisian'ny olona mandrindra izay mitady ohabolana sy mamafa izay mitovy. Raha misy manana hevitra dia tonga soa. Holazaiko eo ihany ny vokatry ny fandinihana rehefa kelikely.
Fa amin'ny ankapobeny aloha izany dia efa mba vitavita ny takelaka ohabolana.org ka afaka mitady sy mampiditra ohabolana tsara indray. Azo jerena amin'ny finday koa izy amin'izao fotoana izao.
Ito sary ambany ito izao dia mampiseho ny olana... izay tsy maintsy hovahaina.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Manaraka»